बढ्दो जनसंख्या व्यवस्थापनका चुनौती | Bishow Nath Kharel
बढ्दो जनसंख्या व्यवस्थापनका चुनौती
Posted on July 11, 2016 by bishownath
July 11, 2016 Categories विचार
विश्वमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरूमा जनसंख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । अधिक वृद्धिका कारणले जनसंख्याको चाप हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । अधिक जनसंख्या समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन । प्राकृतिक स्वरूपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्व जनसंख्याको अत्यधिक चाप हो । सबैलाई प्रत्येक वर्ष पिरोल्ने समस्याका रूपमा यसको अत्यधिक वृद्धि नै हो । यसरी विश्वको जनसंख्या ७ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको अनुमान छ । विश्वमा प्रत्येक २ सेकेन्डमा ९ जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुने गरेको अनुमान छ । प्रति २ सेकेन्ड ६ जना नयाँ शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा ७ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरू थपिन्छन् । बढी जनसंख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरूमा परिरहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरूमा ८० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन् । अहिले विश्वको कुल प्रजननदर २.३८ प्रतिशत छ । विश्वको वार्षिक सरदर जनसंख्या वृद्धिदर १.५ प्रतिशतमात्र रहेको भए पनि अविकसित देशहरूमा यसको वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा बढी भएकाले सन् २०२५ मा ८ अर्ब ३१ करोड र सन् २०५० मा ८ अर्ब ९० करोड मानिसको जमघट हुनेछ । यसमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४५ प्रतिशत पुग्नेछ । जनसंख्या वृद्धिको कहालीलाग्दो चापले अल्पविकसित देशहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । विकासशील देशहरूको पंक्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा भने जनसंख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ ।
नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर अझै अतिउच्च नै छ । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ । १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भए पनि वि.सं. २००९/११ देखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानिक तरिकाबाट लिइएको मानिन्छ । देशमा एघारौं जनगणना लिने कार्य वि.सं. २०६८ मा भएको थियो । एघारौं जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८.५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झन्डै ८ लाख जनसंख्या बढी देखिन्छ ।
पहिलो जनसंख्या लिएको १ सय ५ वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर वि.सं. १९७७ मा –०.१२ प्रतिशत थियो भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने वि.सं.२०३८ सालको जनगणनामा २.६२ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । समग्र रूपमा जनसंख्याको वृद्धिदर घटे पनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा भने जनसंख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ ।
जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो भने राजधानीको जनसंख्या दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ भने मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ ।
देश निर्माणको आधारशिला नै सरकारी योजना हो । जनसंख्याको अध्ययनले देशमा भावी योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यिनै जनसंख्याका आधारमा भोलि गएर देशको योजना बन्न पुग्छ । बढ्दो जनसंख्यालाई हेर्दा साक्षरता बढाउनु वा तिनलाई शिक्षाका आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जनसंख्याको परिणामलाई सरकारले गम्भीर अध्ययन गरेर नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
जलविद्युत्मा ब्राजिलपछि हाम्रो देश भए तापनि देशमा अझै पनि ठूलो जनसंख्या विद्युतीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । त्यस्तै गरी शौचालय बनाउने चेतना हालसम्म धेरैमा नभएको देखिएको छ । तर, मानिसहरूमा सूचनाको साधन पर्याप्त पुगेको छ ।
पेसागत हिसाबमा अझै ठूलो संख्या कृषिमा निर्भर रहेको देखिएको छ । यद्यपि सहरमा मानिसको बसोबास बढी हुनुले कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कृषिको उत्पादन बढाउन ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिमाथि लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ ।
अहिले मुलुकको जनसंख्या २ करोड ८० लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । हाल वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । त्यस्तै गरी औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयत्नहरूमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजननदर भने निकै लामो समयदेखि ६ सन्तान प्रतिआमाकै हाराहारीमा रहेकाले नै जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो । यही वृद्धिदर कायम रहेमा झन्डै ५२ वर्षभित्र नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुन जाने अनुमान छ । २०५८ सालको जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । ०५८ सालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत थियो ।
अन्त्यमा आजको विश्वका विकराल समस्याका रूपमा रहेको अत्यधिक जनसंख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने नै पहिलो हो । जनसंख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वका लागि ठूलो चिन्ताको विषयवस्तु भएको छ । देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले यसको व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती बनेको छ । यसबाट गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन्, जसबाट प्रकृतिप्रदत्त वातावरणीय स्रोेतमाथि चाप पर्न गएको छ भने अर्कातिर बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यहरूमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षा विरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पनाहरू साकार हुन नसक्नुमा जनसंख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
Source : http://np.karobardaily.com/2016/07/92193/73-03-27.